पेट्रोल प्रतिलिटर १५० पुग्यो , निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ! – Nepal Online Khabar
फागुण १९, २०७८ बिहिबार 106
काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेको छ । नेपाल आयल निगमले विहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो ।
रुस–युक्रेन यु’द्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १२० डलर पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएसँगै निगमको घाटा पनि उत्कर्षतर्फ पुग्दै गएको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अपुग भएको भन्दै सरकारसँग सहयोग मागेको छ ।
Prevविप्लव र भीम रावलबीच भेटवार्ता, एमसीसीवि’रुद्ध एकताबद्ध भएर सं’घर्ष गर्ने !
Nextविप्लवसँग भेटेपछि भीम रावलले भने :- देशभक्तहरू एक हुनु राम्रो !